TRUESTORY: ပေါတောတော မလုပ်ကြနဲ့
ရဲတိုက်ကို မူးယစ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)အရ၊
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကျောက်တံခါး
မြို့နယ် တရားရုံးက၊ ဒီနှစ် အေ(၇)
ရက်မှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်
ဒါကို အနုပညာရှင်များက သမ္မတထံ အသနားခံစာ တင်မယ်တဲ့။ တင်ကော တင်ပြီးပြီလား။
ဒါကို သင်္ကြန်တွင်း ကတည်းက ကျနော် ရေးချင်မိတယ်။ မကောင်းလို့ပါ။ အခုတော့ ရေးမိပြီ။ ပထမဆုံး အနုပညာသည်များ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ဘာလဲလို့ တိတိပပ မေးပါရစေ။ ခင်ဗျားတို့
အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ လုပ်ကြပါ။ တစ်လွဲဆံပင် မကောင်းကြလေနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျနော် ရေးပြမယ်လေ။
၁။ ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရာတွင် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် များသည် ညီညီညွတ်ညွတ် တစ်တတ်တစ်အား အနေဖြင့် ပါဝင် ဆင်နွှဲရန်။
၂။ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို လုပ်သား အချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ရန်၊ အကျိုးတူ ခံစားမှုများ မျှတစွာ ရယူနိုင်ရန်၊ အခြား နိုင်ငံတော် အသိအမှတ် ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
၃။ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို လုပ်သားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ချောမော ပြေပြစ်စေရန်၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ဖူလုံမှုတွင် ကူညီရန်နှင့် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို လုပ်သားတို့၏ တရားသော ရပိုင်ခွင့်များကို တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ တောင်းဆိုနိုင်ရန်။
အဲ့ဒါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောင်းတဲ့ဘက်က ဆောင်ရွက်ဘို့ ဆိုတာကို၊ စောဒက တက်စရာ မရှိတော့ဘူး။
သူ့ဘာသာသူ ဆေးခြောက် လက်ဝယ်မိလို့ ထောင်ကျတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဒီလောက် ဇာတ်နာပြစရာ မလိုရေးချ မလိုပါပြီ။
ဘာလဲ သူများတွေ လုပ်သလို ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ ထောင်ကျရင်၊ တရားဥပဒေကို ထထပြီး ကလန် တဲ့ မြန်မာ့ခေတ်သစ် ဒီမိုကရေစီ စတန့်ကွက်ကို လူ အထင်ကြီးအောင်၊ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်အောင် ထ ပ်ကြတာလား။
ဒါဆို ခင်ဗျားတို့အိမ် သူခိုး ခိုးခံရရင်၊ ဓားပြတိုက် ခံရရင်၊ လုယက်ခံရရင်၊ ခင်ဗျားတို့ အမျိုးတွေ မုဒိန်းကျင့် ခံရ၊ အသတ်ခံရရင်၊ ခင်ဗျားတို့ ဒီနိုင်ငံက တရားဥပဒေကို ဘာမှ လာအားမကိုးကြနဲ့။ ရဲမတိုင်နဲ့၊ အမှုမဖွင့်နဲ့၊ တရားခံကို ထောင်မချကြနဲ့၊ ကျိတ်ခံလိုက်ကြလေ၊ ဟုတ်ပလား။
ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရမှာက ရဲတိုက်လို မဖြစ်အောင် ပညာပေး ချပြသော အနုပညာ တင်ဆက်မှုတွေ လုပ်ရမယ်။ အနုပညာ စွမ်းအားနဲ့ မူးယစ် ဆေးဝါးကို တိုက်ဖျက်ရမယ်။ လူသား အရင်းအမြစ်တွေ မူးယစ် ဆေးဝါးကြောင့် ပြုန်းတီး လေလွင့်မှု မဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတို့ အနုပညာနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ပညာပေး တားဆီး ကာကွယ် တိုက်ဖျက် ပေးရမှာ။
အခြားသော လူမှုကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှာလည်း ဒီသဘောမျိုး ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို အနုပညာနဲ့ အလုပ်အကျွေး ပြုကြရမှာ။
အခုဟာက အနုပညာသည် ဆိုပြီး၊ မီးလောင်ရာ လေပင့် တစ်လွဲဆံပင် ကောင်းနေလို့ဗျ။
သိပ် ပေါတောတော မလုပ်ကြနဲ့...အနုပညာသည်တို့။
Posted by TRUE STORY at 11:23 AM
အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား ထောင်ဒဏ်(၂၇)နှစ် အမိန့်ချပြီးေ...
DSA NEVER SURRENDER ရာဇ၀င်
အကြိမ်ကြိမ်တရားနာရန် ဖိတ်ခေါ်သော်လည်း မလာသဖြင့် ဒေါ်...
တရုတ်ကလက်နဲ့ရေး CIA ကခြေနဲ့ဖျက် ကျားရှေ့ မှောက်ရက်...
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင...
အကယ်ဒမီ လူမင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မှ အနား...
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတို့၏ ဘ၀သင်ခန်းစာ ၁၂ ချက်
တပ်မတော်နေ့အတွေး (၂၀၁၄ ခုနှစ်)
Mister & Miss University ပြိုင်ပွဲဝင် ကောင်းမြတ်ဟိ...
လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံးရှိ မိုးသီးများ ကြွေကျ၍ အဘွား...
Grand Royal မဏ္ဍပ်ကို အမည်ပျက် စာရင်းသွင်း
မိန်းမအစစ်တွေ အရှုံးပေးရမဲ့ ဖြတ် ဖောက် ချုပ် သူများ...
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာဖြေရှင်းရေး ရန်ကုန်တိုင်းလ...
Sexy Post လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရာင်းစားတဲ့ ဇာဇာထက်
မိုးသီးဇွန် တသက်လုံးဖုံးထားတဲ့ အမှူတမှုပေါ်ပြန်ပြီ
သေဆုံးသူရဲ့ အလောင်းကို ပြန်ဖော်ပြီး အ၀တ်အစားလဲပေးတ...
ဦးဝင်းတင် အသုဘ အကြောင်းပြု၍ အမြတ်ထုတ်မှုများကြောင်...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ရက်ပိုပေးမပေး ဆုံးဖြတ်မည်
မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ကို မီးပေါ့ဆမှုဖြင့် အမှုဖွင့်
ဦးဝင်းတင် ဓာတ်ပုံတင်မှုကြောင့် NLD အမာခံ အချို့ ခိ...
ကြီး ၄ ကြီးနှင့်စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်သို့ ပြည်သူမှတစ်ဆင့်အိတ...
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ညွှန်းကိန်းအဆင့် ၁၅ အထက်သို့ ယနေ...
UWSA နဲ့ SSA တောင်းပိုင်း တပ်ဖွဲ့ သံလွင် အနောက်ခြမ...
Myanmar Navy Sea Shield 2014 HD
ဇာတ်ကားတွေကို ကိုယ်ကျိုး မကြည့်ဘဲ လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ရ...
ဇာတ်ကားတွေဆက်တိုက် ရိုက်ကူးသွားတော့မယ့် ခင်ဝင့်ဝါ
သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက် ထောင် ၆ နှစ် ဘာလို့ ကျ
အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက် ကာကွယ်ပေးထားသည့် ပုဒ်...
UPWC နှင့် NCCT ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဇာဂနာ အပြေးအလွှား ရောက်လာပြီး ဘောလုံးကန်ရန် ပြောသဖြ...
ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ စကားများနဲ့ မင်းကိုနိုင် (အပိုင်...
လောကမှာ ရှာတဲ့အရာ တွေ့မည်သာ...
DSA Never Surrender
စစ်သားနဲ့ စစ်တပ်အပေါ် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဘယ်လိုမြင်လဲ
ရက်စက်ယုတ်မာသူအချို့ရဲ့ဘ၀ပျက်အောင် ကောက်ကျစ်မှုကို ...
KIA အဖွဲ့၏ ခြိမ်းခြောက်မောင်းထုတ်မှုကြောင့် နေရပ်ပြ...
သူရ ဦးရွှေမန်း နိုင်ငံရေးဆောင်းပါး ရေးသားနေပြီ
မလေးရှားလေယာဉ်ဆီက ယူဆရတဲ့ နောက်ထပ် အချက်ပေးလှိုင်း ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့စည်းများက တစ်အိမ် တ...
ဒေါ်စု လုံးဝ မသွားသည့် ဦးဝင်းတင်ထံသို့ အရှင်ဦးဝီရ...
အဝေ မတည့်ဖြစ်သဖြင့် မြစ်ဆုံ လမ်းလျှောက်ပွဲ ခေါင်းေ...
ထားထက် ထက် ၏ သင်္ကြန် ရင်ခုန် သံ
သမီးကလေး ရွာကို ဘယ်လို လုပ်ကြံကြသလဲ ??
သူခိုးကို ဓါးရိုးကမ်း နေကြပြီ
sorry လို့အလွယ်တကူ မပြောပါနဲ့
ကျန်စစ်သား တိုက်ရေယဉ် တာဝန်စတင်
“April Fools Day နဲ့ အနု ပညာ ရှင်တို့ ရင်ခုန် သံ”
အပူဒဏ် အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး နှိုးဆော်ချက်
ဦးသန်းရွှေ နှင့် ဒေါ်စု
၈၈ မျိုးဆက်(ငြိမ်း/ပွင့်) ကိုကိုကြီးမှ မင်္ဂလာဆောင် ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး...
“ကိုယ်ကိုယ် တိုင် ကြော်ငြာ ပြီး ပြည်ပ ကို ထိုးဖောက...
ဒေါင်းမကြီး ဒေါ်စု နှင့်သူမ ၏ လက်အောက်များ
စနစ်ကြောင့်လော .... လူကြောင့်လော
NLD ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း နောက်မီး လင်း/မလင်း စ...
မောင်တောမြို့နယ် သာယာကုန်းရွာကို အကြမ်းဖက်ရန် ကြံေ...
MH370 နောက်ဆုံးပြောဆိုမှု မှတ်တမ်း အပြည့်အစုံကို မေ...
(MH370 ပျောက်ဆုံးမှုဟာ ၉/၁၁ လို တိုက်ခိုက်မှု အသစ်ဖြ...
သာသနာ့အလံအား မဖွယ်မရာပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားသူအား ...
အပူချိန်ကြီး၍ အပူရှပ် (Heat Stroke) အသက်သေဆုံးသည့်...
ဗေဒင်ဝါသနာအိုး မှ ( ၇ ) ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၇-၃...